KATHMANDUTemperature 14°CAir Quality160
यो देशमा एउटै पार्टीको सरकार चलेको दुई वर्ष नाघिसक्यो । उद्‌घाटन, शिलान्यास, भेटघाट, भ्रमण, सञ्‍चार माध्यम जहाँ पनि एउटै प्रधानमन्त्री, एउटै मन्त्रीहरूको अनुहार हेर्दाहेर्दा हामी जनतालाई वाक्क लागिसक्यो । सरकारको परिवर्तन त हेर्न पाइएन पाइएन, राजनीतिक खिचातानी, सांंसदहरूको खरिदबिक्री, गुटहरूबीचको संघर्ष, नेताहरूबीचको गाँड कोराकोर, कार्यकर्ताबीचको कुटाकुट । यस्ता कुरा पनि नहुँदा मनमा साह्रै अशान्ति भयो ।
हाम्रो यही दु:खलाई मनन गरेर होला, वर्तमान यथास्थितिको पट्यारलाग्दो वातावरणलाई चिर्दै बल्ल केही शुभ समाचार बजारमा आउन थालेका छन् । सरकार अलिअलि हल्लिन थालेको छ । सत्ताधारी पार्टीका बडेबडे नेताहरू यस्सो आपसमा पौँठेजोरी खेल्न खोज्दै छन् । सञ्‍चार माध्यममा पनि अलिकति हरियाली छाएको छ । राजनीतिक अशान्तिको यो वातावरणले बल्ल यो मनमा थोरै भए पनि शान्ति पलाएको छ । र, यो शान्तिका संवाहक अरू कोही नभएर दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरू नै हुन् । पाँच वर्षसम्म यथास्थितिमा बस्‍नुपर्ने चिन्तालाई दूर गर्दै हामीलाई बीचैमा मनोरन्जन प्रदान गर्न अग्रसर कमरेड वामदेव र उहाँको टिमलाई हार्दिक स्वागत छ ।
वामदेवजीले ‘मलाई दुई वर्ष मात्र प्रधानमन्त्री दिए मुलुकको कायापलट गरिदिन्छु । अझ पाँच वर्ष मौका पाएँ भने त चीनलाई नै उछिनेर अघि बढ्छु’ भनेको समाचार सुनेदेखि नै उनलाई हामीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्‍न इच्छा गरेको हो । हामीले खोजेको नेता नै यस्तै हो । त्यसैले वामदेवजीलाई तुरुन्त अगाडि बढाउनुपर्छ । रात रहे अग्राख पलाउँछ । अब पर्खिने कुरा हुँदैन । अर्को चुनावमा पनि जनताले हराए भने के हामीले यो जुनीमा वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री भएको देख्‍नै नपाउनु ?
हे वामदेव, हामी नेपाली जनतालाई पनि तिमीलाई जस्तै यो राजनीतिक स्थिरता मनै पर्दैन । प्रतिपक्षी दललाई पनि मन पर्दैन । विदेशीहरूलाई पनि मन पर्दैन । कसैलाई मन नपर्ने यो यथास्थितिबाट मुक्त गर्न तिमीजस्तै अधीर नेताको आवश्यकता परेको छ । त्यसैले तिमीले राजनीतिमा यसैगरी बारम्बार हलचल ल्याइरहनुपर्छ । पार्टीमा भुइँचालो ल्याउँदै गर्नुपर्छ, नेताहरूलाई दौडाइरहनुपर्छ, कार्यकर्तालाई भिडाइरहनुपर्छ । सरकारलाई उठबस गराउने प्रयास जारी राख्नुपर्छ । यस्तो शक्तिशाली नेताले चुपचाप बस्‍नु हुँदैन, चौबीसै घन्टा शक्ति आर्जनका लागि लागिरहनुपर्छ । ढोकै नभएको ठाउँबाट सिंहदरबारभित्र पस्‍ने बाटो खोज्‍नुपर्छ । यताबाट घोचेर भ्वाङ पार्नुपर्छ, उताबाट घोचेर प्वाल पार्नुपर्छ । देश, पार्टी र जनताभन्दा माथि पुगेका नेताले आफूलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । पद प्राप्त गर्नका लागि नियम–कानुन, विधान, संविधान, गुट, दल जे–जे भए पनि फेर्नुपर्छ ।
चुनाव हार्नेहरू संसद्‌मा छिरिसके, वामदेवले मात्रै सम्माननीय हुन नहुने भन्‍ने केही छैन । यस्ता सक्रिय, जुझारु, परिपक्‍व र बूढा नेताले अरूहरूअन्तर्गत बस्‍न पनि सुहाउँदैन । अरूलाई नेता मान्‍न पनि सुहाउँदैन । त्यसैले हे वामदेव, उठ, जाग, अघि बढ । प्रधानमन्त्री हुने सपना पालिराख, सिंहदरबार र बालुवाटारको शान्तिलाई भंग गरिराख, जनतामा तरंग ल्याइराख, मतदाताको मनलाई भरंग पारिराख, सञ्‍चार माध्यमलाई भरपूर मसला दिइराख, प्रतिपक्षलाई आशा देखाइराख, कम्युनिस्ट विरोधीहरूको उत्साह जगाइराख । यस्तो स्पष्ट बहुमत ल्याएका बेला पनि ठेलठाल गरेर प्रधानमन्त्री नभए कहिले हुने ? नछोड है, वामदेव नछोड ।